Akingkwụsị ọdịnala 50, InverPad bụ teknụzụ mbụ nke Aquark mepụtara. Site na njikọta Pad zuru oke, Stepless-DC-Inverter na teknụzụ mkpọtụ, ọ na - eme ka ahụmịga igwu mmiri na ọkwa ọhụụ.
Nwee Ezi Silence
N'ebe ịdị anya mita 1, nwee ahụmịhe ụda dịka ala:
36,5dB (A)Ọnọdụ Silence
46dB (A)Ọnọdụ Enwe Mmelite
IWU DC INI
Stepless DC Inverter na-enye onye na-adọkpụ aka idozi ọsọ ahụ dabere na achọrọ na ọnọdụ n'ezie. Enwere ike idoghachite oge na RPM otu n'otu iji nye ọrụ nchekwa nzọpụta dị egwu na ịgbachi nkịtị.
GARKWUO ỌZỌ >>
Lelee ihe na - eme anyị!
AKW .KWỌ UKWU
“Anyị emeela ka ire ahịa mmanụ anyị na-ere okpomoku dị 3 site na Maazị Silence. Mgbe ndị ahịa hụrụ ya n'ime ụlọ ebe a na-ere ihe, a na-adọrọ ya mma site na nkwado ọla nchara ya. Mgbe ahụ ha ga-anụrịrị na ọ ga-ekwenye na ọ bụ nnukwu ngwaahịa. Anyị bụ ndị…
Ndị na-ere ahịa Hungary Kerex na ndị ahịa nwere Mazi Silence nwere mmasị na njiri pụrụ iche ya. Ọ dị nnọọ ka njupụta n'ime ụlọ egwu egwu! Ihe dị ịtụnanya ma dị iche na ngwaahịa na ndị na-asọmpi bụ arụmọrụ dị oke egwu ...